ယောဂ သင်တန်းတက်ကြမလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ယောဂ သင်တန်းတက်ကြမလား
Posted by we R one on Jun 15, 2011 in Creative Writing | 13 comments
ရောဂ သင်တန်းတက်ကြမလားဗျို့ ၊ ဒီနေ့ထုတ်7Days News ဂျာနယ်ထဲမှ ဖတ်ရတယ်။ India သံရုံမှာ တက်ရမှာ ။ မှတ်ပုံတင်ကြေးက3ဒေါ်လာ ၊ တစ်လ ကို5ဒေါ်လာ တဲ့။ မဆိုးဘူး ။ ဒေါ်လာဈေးတွေ ကျနေတာနဲ အတော်ပဲ။ :D
စိတ်ဝင်စားလို့ ရန်ကုန် လမ်းညွှန်မှာ India သံရုံး ဖုန်းနံပါတ်ရှာပြီး ဆက်ကြည့်တော့ အားလုံးရုံးဆင်းသွားကြပါပြီ။ India အမျိုးသားတစ်ယောက် ဖုန်းလာကိုင်ပါတယ်။ အသံနားထောင်တာနဲ တင် ဗမာလို ပြောတတ်မှာမဟုတ်ဘူလို့ တွေးမိတယ်။ သိတယ်မဟုတ်လား ကိုယ်က လည်း အီးလို အရမ်းကျွမ်းတာ ဆိုတော့ ” မြန်မာ လို ပြောတတ်လားလို့ ” မြန်မာ လို ပဲ ပဲ မေးလိုက်ပါတယ်။ :D သူကလည်း ပြန်ဖြေရှာပါတယ်။ ကျွန်တော် နည်းနည်းပဲ တတ်တယ်တဲ့။ :D ” Yoga Class အကြောင်းသိချင်လို့ပါ ဆိုတော့ ခဏ လေးနော်။ ဆိုပြီး ဖုန်းဘေး ချ ထွက်သွားပုံပေါ်တယ်။
မာမားခေါက်ခွဲ နူးတဲ့အချိန်လောက်ကြတော့ ဖုန်းပြန်လာကိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ ကြတော့ မြန်မာလိုပဲ မပြောတတ်တော့တာလားမသိဘူး. ယောဂ နဲပတ်သက်ပြီး ဘာအကြောင်းတွေ သိချင်တာလဲ လို့ မေးပါတယ်။ ကျွန်မ ကဘယ်အချိန်တွေ လဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အခုမှ စတတ်မှာလား လို့ ပြန်မေးပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ လို့ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဒဟူး ၊ သောကြာ ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့တွေ ဆိုရင် မနက် ၆ နာရီ ခွဲ ကနေ ၇ နာရီခွဲ ၊ အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေ့ ၊ စနေ နေ့တွေ ဆိုရင် ညနေ ၆ နာရီ က နေ ၇ နာရီ ထိပါတဲ့ ။ တစ်တန်း ကို လူ 30 က နေ 40 ကြားတဲ့
ကဲ ဘယ်လိုလဲ တက်ကြမလး ။ ကိုယ်လုံးလည်း လှ ၊ အကြောလည်း ပြေ ၊ စိတ်လည်းကြည်လင်၊ ရုပ်လည်း နုပျို တဲ့ ယောဂ သင်တန်းတက်ကြမလေ။
အပြင်သင်တန်းတွေ နဲ စာရင် ဈေးလည်း အရမ်း ကို သက်သာပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို ဘယ်နှစ်ရက် တက်ရတာလဲလည်း သိချင်သေးတယ်။
ဗုဒ္ဒဟူး ၊ သောကြာ ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့တွေ ဆိုရင် မနက် ၆ နာရီ ခွဲ ကနေ ၇ နာရီခွဲ ၊ အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေ့ ၊ စနေ နေ့တွေ ဆိုရင် ညနေ ၆ နာရီ က နေ ၇ နာရီ ထိပါတဲ့ ။ တစ်တန်း ကို လူ 30 က နေ 40 ကြားတဲ့။
သံရုံးက သင်ပေးတာ ဆိုတော့ အိန္ဒိယ နည်းပညာ စစ်စစ်တွေ ဖြစ်မှာပေါ့။ ကောင်းလေစွ။ ကောင်းလေစွ
ဟုတ်တယ် မဆူး ရေ India နည်းပြဆရာ ကိုယ်တိုင် သင်မှာတဲ့…
ရောဂါ သင်တန်း …..:)
နွယ်ပင်လဲ တက်ချင်လိုက်တာ ဒါပေမဲ့ မနက်ပိုင်း အချိန်တွေက အိပ်ယာက မထနိုင်ဘူး ညနေပိုင်းအချိန်တွေက သင်တန်းနဲ့ ညိနေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ …..
ယောဂသင်တန်းကိုအချိန်ရရင်သွားတက်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်…ကိုယ်တိုင်လဲတက်ဖူးလို့ သူ့ ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကိုသိထားလို့ ပါ….အဲမှာတက်တာ၁လမှ၅ဒေါ်လာဆိုတော့တကယ်တန်တယ်…ဒီမှာ၃လစာကို ၄သောင်းနီးပါးပေးရတယ်…တစ်လစာချင်းသွင်းရင်၁သောင်းခွဲကျော်တယ်…
ဒါဆို ၈ ဒေါ်လာသွင်းရမှာပေါ့နော်။ နောက်ပြီး ဘယ်နှလအပြတ်လဲမသိဘူးနော်….
အဲ … အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟယ် …
၀င်ကြေးက 3ဒေါ်လာလို့ရေးတာပါ … တနေ့ဝင်ရင် တခါပေးရမဲ့ပုံစံမျိုးမရှင်းမရှင်းရေးထားတယ် …။ လစဉ်ကျေးက ငါးဒေါ်လာတဲ့ မနက်ပိုင်းနဲ့ညပိုင်း ၂ချိန်ရှိတယ်တဲ့..။
နောက်လမှာ တန်းခွဲ အသစ်ရှိပါတယ်။ Registration Fees $3 က တစ်ခါတည်းသွင်းရမှာ ၊ လစဉ်ကြေး $5 ပဲ လစဉ်သွင်းသွားရမှာတဲ့ ။ ဘယ်နှစ်လ လဲဆိုတာ ကို မမေးလိုက်ရဘူး။ တက်ချင်တဲ့ သူ သံရုံကို လာပြီး Form ဖြည့်ရမယ်တဲ့ ။
ညိုလေး ရောဂ သင်တန်းတော့ မတတ်ဘူးပါဘူး မေမေနဲ့တော့ Gym တူတူဆော့ဘူးပါတယ်၊ အကြောအချင်တွေတော့ တကယ့်ပျော့မှရမယ်ထင်ပါတယ် လုပ်နိ်ုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့း)
ဟာ ယောဂပါ မှားလို့ ကိုတညင်သားရေးတာကို ကြည့်ပီးမှားသွားတယ် ဟွန့် လူဆိုးကြီး
ယောဂ ကိုစိတ်ဝင်စားရင် wellness of yoga ဆိုတဲ့ခွေတော်တော်ကောင်းပါတယ်၊ National CD ခွေဆိုင်မှာရတယ်။